Fil d'actualités du 19/05/2020
13/05/2020 - 14:15 : CORONAVIRUS: Olona 20 no voamarina fa voa araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta androany. 15 tany Tomasina, 3 tany Moramanga, 2 teto Antananarivo. Fitiliana omaly 12 mey ireo.
12/05/2020 - 12:00 : JEAN JACQUES RATSIETISON: Aleo fohanana ny fihibohana fa ny hanohanana no hahafaty olona eto fa tsy ny aretina, ary ny olona anefa ny mitakosona ihany. Mila ampiakarina ny fitiliana. Raha tena mahomby ny covid organics efa nofoanana ny fihibohana.
07/05/2020 - 15:10 : TOAMASINA: Tsy maty fa mbola manaraka fitsaboana sy tsy misy ahiana ny ain'ilay zazalahikely 9 volana fa tsy araka ny resaka mandeha amin'ny tambajotra facebook.
07/05/2020 - 14:45 : CORONAVIRUS: Olona 35 no indray voan'ny Coronavirus androany 7 mey, ka 22 eto Antananarivo Renivohitra.
07/05/2020 - 14:45 : CORONAVIRUS: Olona 35 no indray voan'ny Coronavirus androany 7 mey, ka 22 eto Antananarivo Renivohitra, ary 13 any Toamasina.
Archive du 20190306
Mpiasan’ny Jirama Grevy faobe manomboka rahampitso
Tapitra ny alatsinainy teo ny fe-potoana 48 ora nomen’ny mpiasan’ny Jirama hialan’ny Tale jeneralin’ity orinasam-panjakana mpamokatra jiro sy rano ity Aimé Olivier Jaomiary noho ny lesoka maro tsapan’izy ireo, toy ny fifaranarahana tamin’ireo vahiny izay mahazo tombontsoa mihoapampana.
Fitondrana ny firenena Ny praiminisitra no tompon’ny baolina
Mpiasa am-polony taona maro tao anatin’ny rafitra iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT ny praiminisitra ankehitriny. Olon’ny sehatra iraisam-pirenena izy ary mety atokisan’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola na ny PTF,
Fifidianana depiote Hivoaka amin’ny 19 martsa ny lisitry ny kandida
Ao anatin`ny fanomanana tanteraka ny fizotry ny fifidianana solombavambahoaka ny CENI Madagascar amin`izao. Niely ny feo fa hahemotra ny tetiandro fanaterana antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ho depiote.
Fifidianana solombavambahoaka Hifaninana ihany koa ny IFI
Vovonana vao nijoro tamin’ny volana septambra taona 2018 lasa teo ny IFI tarihin- dRamanambintana Richard. Miisa 14 ireo fikambanana nivondrona tao anatiny teny am-piandohana ary efa mahatratra 500.000 ny mpikambana rehetra ankehitriny.
Tsy misy mpangoraka
Nalaza tao anatin’izay iray volana sy tapany nitondran’ny fanjakana Rajoelina izay ny loza mahatsiravina, ny valan’aretina, ny tsy fandriampahalemana samy namoizana aina avokoa.
Nanolotra ny taratasy manendry azy tamin'ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny Lapam-panjakana Iavoloha omaly maraina ny Ambasadaoro vaovaon'i Etazonia miasa sy monina eto Madagasikara Michael Pelletier.
Faritra Atsimo Andrefana Mila fotodrafitrasa famatsian-drano 15 000 isa
Inona ireo vokatry ny fandinihana sy ireo fikarohana teo amin’ny sehatry ny rano, fahadiovana ary ny fidiovana any Atsimon’ny Nosy ?
Ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro Hamboly hazo eny Behenjy ny FNCLM
Olana goavana sedraintsika eto Madagasikara ankehitriny ny fiovaovan’ny toetr’andro.
ANTANIMORA SY TSIAFAHY Avo telo heny amin’ny zakan’ny fotodrafitrasa ny voafonja